बजार - Dainik Nepal
सोमबार, १७ चैत २०७६
कृषकलाई रोपाईँ छाडेर भ्यागुताको बिहेको चटारो
तेह्रथुम, १७ असार । असार महिनाको मध्य बितिसक्दा समेत पर्याप्त पानी नपरेपछि कृषकहरु चिन्तित बन्न थालेका छन् । अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भ्यागुताको बिहे गरिदिएपछि पानी पर्ने जनविश्वासका साथ रोपाईँको चटारोलाई छाडेर जोडी भ्यागुता...
नखानुस् आँप धनगढीको !
धनगढी, १६ असार । संयुक्त बजार अनुगमन समिति कैलालीले कार्बाइड नामक हानिकारक रसायन प्रयोग गरी पकाइएको करिब छ लाख मूल्य बराबरको दश हजार किलो आँप जफत गरेको छ । कार्बाइड प्रयोग गरी पकाइएको आँप...
जलविद्युतमा गाउँलेको सवा दुई करोड सेयर
बागलुङ, १६ असार । जिल्लाको तारा गाविसमा निर्माणाधीन ताराखोला सामुदायिक जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय जनताले सवा दुई करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गरेका छन् । दुई वर्षअघि सुरु भएको ३९४ किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजनामा तारा, हिल...
मर्स्याङ्दीमा विद्युत् उत्पादन बढ्यो
तनहुँ, १६ असार । तनहुँको आँबुखैरेनी गाविस–६ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बढेको छ । कुल ६९ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट हिउँदमा २७ मेगावाट विद्युत् घटेर ४२ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको थियो भने हाल बर्खायाममा...
चीनले अर्को जहाज लिन बोलायो
काठमाडौँ, १६ असार । चीनले अर्को नयाँ जहाज लिन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल बायुसेवा निगमलाई बोलाएको छ । चीनले दिन लागेका ६ मध्ये पहिलो जहाज भने यहाँ आएर व्यापारिक उडान गरिरहेको छ । जहाज अभावमा...
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता
काठमाडौँ, १५ असार । सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज...
उच्च गुणस्तरको मदिरा उत्पादक कम्पनी जोनी वाकर एक नम्वरमा
ब्रान्ड मूल्यांकन गर्ने एजेन्सी ब्रान्ड फाइनान्सले उच्च गुणस्तरको मदिरा उत्पादक कम्पनी जोनी वाकरलाई ‘मस्ट भ्यालुएवल ब्रान्ड ड्रिङ्क’को सुचीमा अग्रस्तस्थानमा समेटेको छ । गत बर्ष पनि नम्बर एक ब्रान्ड रहेको जोनी वाकरका ह्विस्की ब्रान्ड फाइनान्सको...
पोको पारेकै भरमा खाए तेल उद्योगले सवा अर्ब भ्याट
काठमाडौं, १५ असार । तेल उत्पादन गर्ने उद्योगले भारतबाट खरिद गरेको तेल नेपालमा पोको पारेर बिक्री गरेका आधारमा सर्वसाधारणले बुझाएको आधा भ्याट रकम खाने गरेको पाइएको छ । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर तेल उत्पादन...
नेपाल व्यापार विश्वास सूचकाङ्कमा वृद्धि
काठमाडौँ, १३ असार । निर्वाचित सरकार गठनपछि निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका वातावरणमा सुधार आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले हालै गरेको अनुसन्धानले अस्थिर राजनीतिमा क्रमशः सुधार आई लगानी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन...
बाँकेमा साँढे २ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता
खजुरा (बाँके), १३ असार । जिल्लामा मोबाइल प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या साढे दुई लाख नाघेको छ । नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार बाँकेमा दुई लाख ५७ हजार १९९ जना मोबाइल ग्राहक छन् । ३५ लाख ४६ हजार...
बैंक तथा विमाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई अख्तियारबाट सचेत
काठमाडौँ, १२ असार । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि दिएको निर्देशन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले आज मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि...
सेयर बजारमा छलाङ : अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार
काठमाडौं, १२ असार । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बुधबार अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस दिन दोस्रो बजारमा ९१ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा आशिष ज्ञवालीले लेखेका छन्...
« 1 … 868 869 870 871 872 … 886 »
कोरोना हटाउने कि प्रधानमन्त्री हटाउने महाशय ?
लकडाउन थप ८ दिन बढाउने सरकारको निर्णय
वैशाख ३ गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित
लकडाउन उल्लंघन गर्दै प्रहरीमाथि कुटपिट
प्रमुख सचेतक खाणद्वारा सरकारलाई धन्यवाद
कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्ने प्रयासमा रक्षात्मक लिडर
तीन दिनमा ८८ हजार सिलिन्डर ग्यास बिक्री
लकडाउनले रुपन्देहीमा ७ लाख कुखुरा बिकेनन्, किसान डुब्ने स्थितिमा
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले विद्यार्थी र मजदूरलाई घर पुर्‍याइदिने
कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा मृत्यु भएका बाबुरामको रिपोर्ट नेगेटिभ
बुटवल अस्थायी अस्पतालका बिरामीको रिपोर्ट नेगेटिभ